people Nepal » मतदाता कहाँ कति ? कहाँ सबैभन्दा बढी र कहाँ सबैभन्दा कम ? मतदाता कहाँ कति ? कहाँ सबैभन्दा बढी र कहाँ सबैभन्दा कम ? – people Nepal
मतदाता कहाँ कति ? कहाँ सबैभन्दा बढी र कहाँ सबैभन्दा कम ?
काठमाडौँ, २० कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा सबैभन्दा बढी मतदाता छन् । निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले १० वटा क्षेत्र रहेको काठमाडौँभन्दा मोरङमा ४१ हजार ३११ मतदाता बढी छन् ।
काठमाडौँमा दस निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको ललितपुरमा दुई लाख २८ हजार ३३९ मतादाता छन् । दुई लाख ३३ हजार ५०५ मतादाता रहेको धादिङमा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् । भक्तपुरमा एक लाख ७८ हजार ९९ मतदाता छन् ।
झापामा चार लाख पाँच हजार २३६ मतदाता छन् । सुनसरीमा चार लाख ७४ हजार ३०८ मतदाता छन् । झापामा पाँच र सुनसरीमा चार निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीन लाख ५४ हजार ४० मतदाता रहेको चितवनमा तीन निर्वाचन क्षेत्र छन् । पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देहीमा पाँच लाख २२ हजार ६०२ मतदाता छन् ।
प्रदेश २ का सबै जिल्लामा चार÷चारवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जहाँ धनुषामा सबैभन्दा बढी मतदाता छन् । धनुषामा चार लाख चार हजार ६७४ मतदाता छन् । आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम मतदाता पर्सामा दुई लाख ८९ हजार ५४ छन् ।
सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा छन् । मनाङमा पाँच हजार ८८१ मतदाता छन् । मुस्ताङमा नौ हजार ४२७ मतदाता छन् । मनाङ र मुस्ताङ दुवैमा प्रतिनिधिसभामा एक/एक र प्रदेशसभामा दुई/दुई क्षेत्र छन् । रुकुम पूर्वमा २७ हजार ९२८ मतादात छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा ७५ हजार ५३८ मतदाता छन् । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कालीकोट लगायतका जिल्लामा मतदाता एक लाखभन्दा कम छन् । सबै जिल्लामा एक/एक
निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
प्रदेश ७ का तीन जिल्ला बाजुरा, डडेलधुरा र दार्चुलामा मतदाता एक लाखभन्दा कम छन् । बाजुरामा ६९ हजार ८३४, डडेलधुरामा एक हजार ३७५ र दार्चुलामा सात हजार ५१३ मतदाता छन् ।
सबैभन्दा बढी मतदाता प्रदेश ३ मा
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता प्रदेश ३ मा छन् । प्रदेश ३ मा ३० लाख ७४ हजार ३८४ मतदाता छन् र सबैभन्दा कम मतदाता प्रदेश ६ मा छन् । प्रदेश ६ मा आठ लाख ४६ हजार ९४१ मतदाता छन् । प्रदेश १ मा २९ लाख ९३ हजार ७७४ मतदाता छन् । प्रदेश २ मा २७ लाख ६७ हजार ३७५ मतदाता छन् । प्रदेश २ मा प्रतिनिधिसभामा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार प्रदेश ४ मा १५ लाख ६८ हजार ९२४ मतदाता छन् । प्रदेश ५ मा २७ लाख ४० हजार ८६४ मतदाता छन् । प्रदेश ७ मा १४ लाख ३५ हजार ६७३ मतदाता छन् ।
तेस्रोलिङ्गी मतदाता १६७
आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतदाताको अद्यावधिक विवरणअनुसार तेस्रोलिङ्गी मतदाता १६७ जना छन् । कुल मतदातामध्ये ७७ लाख ७६ हजार ६२७ पुरुष मतदाता छन् भने महिलाको सङ्ख्या ७६ लाख ५१ हजार १४१ छ ।